डोनाल्ड ट्रम्प को हुन् ? आफैले गरे यस्तो खुलासा – Deshko News
Home » मुख्य समाचार » डोनाल्ड ट्रम्प को हुन् ? आफैले गरे यस्तो खुलासा
डोनाल्ड ट्रम्प को हुन् ? आफैले गरे यस्तो खुलासा
वासिङ्टन, अमेरिका, पुस २३
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार बिहानै ट्वीटर सन्देशमा आफू ‘एकदम स्थिर क्षमतावान् स्वभाव’को मानिस भएको जनाउनुभएको छ ।
वासिङ्टनमा छोटो समयमा नै ठूलो सङ्ख्यामा बिक्री भएको पुस्तकबारे ट्रम्पले भन्नुभयो, “वुल्फको पुस्तक मैले ‘दिक्कलाग्दो र झुटो’ भएको पाएँ ।”
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूलाई चोट पु¥याउन सञ्चारमाध्यम र अरूले उक्त पुस्तकलाई अघि बढाएकोे दाबी गर्नुभएको छ । रासस सिन्हा